အတာအိုးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ… - Real Gaming Myanmar
အတာအိုးဆိုတာ သင်္ကြန်တွင်းမှာ သိကြားမင်းက လူ့ပြည်ကို ဆင်းလာတယ်လို့ အယူရှိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သိကြားမင်းကို ကြိုတာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ မကောင်းမှု တတ်နိုင်သမျှမလုပ်ဘဲ ကောင်းမှု ကုသိုလ်နဲ့ပဲမွေ့လျော် ကြပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အတာအိုးနဲ့ အတူ အတာပန်းဆိုတာရှိတယ်။ အတာပန်းတွေကတော့……..
တနင်္ဂနွေဆို အ-ဥ -အုန်းရွက်၊သြဇာရွက် ၊
တနင်္လာအတွက်ဆို … က -ခ-ဂ-ဃ-င ထဲက ကန့်ကော်ပန်း၊ခရေ …
စနေဆို တမာရွက်၊ ဒန်းပန်း၊ အစရှိသဖြင့်…… နေ့ ၇ နေ့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ၇ နေ့နံပန်းနဲ့ပါ။ တစ်ချို့ကလဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမူတည်ပီး ဒန်း၊ ဇီး၊ စသည်ဖြင့် ထည့်ကြတယ်။ သင်္ကြန် ၄ရက်လုံး အတာအိုးနဲ့ကြိုပီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ရောက်တော့ သဲဖြူ၊ ချည်ကြိုးတွေထပ်ဖြည့်ပီး အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်ကြတဲ့အခါ “အတာအိုး” နဲ့ “အတာပန်း” ကနေ “ပရိတ်အိုး” နဲ့ “ပရိတ်ပန်း” အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းပီး မိမ်တို့အိမ် ပတ်ပတ်လည်မှာ “ပရိတ်ပန်း” “ပရိတ်သဲ” တွေနဲ့ ကာရံပီး အန္တရာယ်ကင်းအောင် လုပ်တယ်လို့ အယူရှိတယ် …. ။
တခါက သိကြားမင်းနှင့် ဗြဟ္မာမင်းတို့ ၂-ယောက် စကားလက်ဆုံ ပြောကြရာ ‘ကဿပဘုရားရှင်လက်ထက် မတိုင်ခင်က လူ့ပြည်၌ တစ်ပတ်လျှင် ၈-ရက် ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၇-ရက်သို့ ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း’ သိကြားမင်းက ပြောလေရာ ဗြဟ္မာမင်းက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုကာ ငြင်းခုံကြပါသတဲ့။
ထို့နောက် ရှူံးတဲ့သူ ခေါင်းဖြတ်ခံကြေးဟု သတ်မှတ်ကာ လူ့ပြည်သို့ ဆင်းပြီး ထိုအချိန်က သီလ၊ သမာဓိနှင့် ပြည့်စုံသည့် ရသေ့ထံတွင် အဆုံးအဖြတ် ခံယူကြပါသတဲ့။ အဘိဉာဏ်ရ ရသေ့က ယခုအခါတွင် လူ့ပြည်တွင် တနင်္ဂနွေအစ စနေအဆုံး ၇-ရက်သာ ရှိတော့သည်ဟု အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့လေသတဲ့။ ဗြဟ္မာမင်းလည်း သူ့ကတိအတိုင်း သူ၏ဦးခေါင်းကို အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ဖြတ်ပြီး သိကြားမင်းလက်သို့ ပေးအပ်လိုက်ပါတယ် ….. ။
ထိုဗြဟ္မာဦးခေါင်းပြတ်ကြီး သိကြားမင်းလက်ထဲသို့ ရောက်သည့်အခါ ဒီဗြဟ္မာဦးခေါင်းပြတ်ကြီးကို မြေပေါ်ချထားလျှင် ၇-နှစ် ကမ္ဘာမီးလောင်ပြီး မိုးခေါင်လိမ့်မည်၊ ရေတွင် ထားပါကလည်း သမုဒ္ဒရာ ၇-စင်းမှ ရေများ ခန်းခြောက်သွားလိမ့်မည်လို့ သိကြားမင်းက စဉ်းစားမိသတဲ့။ ဒါနဲ့ မြေမှာလည်း မထား၊ ရေသို့လည်း မပို့တော့ဘဲ နတ်သမီး ၇-ယောက်ကို တစ်ဦးလျှင် တစ်နှစ်စီ ဗြဟ္မာဦးခေါင်းကို ကိုင်ထားရန် တာဝန်ပေးလိုက်သတဲ့ ….. ။
ထိုနတ်သမီးတွေရဲ့ တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ဗြဟ္မာဦးခေါင်းကိုင်ရန် အလွှဲအပြောင်းကို သင်္ကန္တလို့ ခေါ်ပြီး ထိုမှ ရွေ့လျော ဆင်းသက်ကာ သင်္ကြန်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါသတဲ့။ ဒါကတော့ သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောတတ်တဲ့ ပုံပြင်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ဝေတဲ့ သင်္ကြန်စာများမှာလည်း ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို လွှဲပြောင်းပေးနေပုံကို ဖော်ပြလေ့ရှိတာ သတိပြုမိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သင်္ကြန်ဆိုတာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း အဓိပ္ပာယ်လို့သာ လွယ်လွယ် မှတ်လိုက်ကြပါစို့။
ရှေးမှတ်တမ်းများအရ ရေကစားပွဲတော်ကို ပထမဆုံး စတင်ခဲ့သည့် ဘုရင်မှာ ပုဂံခေတ်၊ နရသီဟပတေ့မင်းလက်ထက်တွင်ဟု သိရပါတယ်။ ထိုမင်းသည် ရေကစားပွဲတော်တွင် သူ၏မိဖုရား စောလုံကို စ,နောက်မိခဲ့ဖြင့် စောလုံမှ ထမင်းပွဲတွင် အဆိပ်ထည့်ကာ လုပ်ကြံသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်က အချိန်မီ သိရှိသဖြင့် အသက်မသေခဲ့ဘဲ မိဖုရားစောလုံကို မီးကျီးခဲရဲရဲတွင် မီးကင်သတ်စေခဲ့ပါတယ်။ သင်္ကြန်အစ ကြေကွဲစရာ မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဟုသာ ဆိုပါရစေ …. ။
ရှေးပညာရှိကြီးတွေဟာ အတာနှစ်ဦးမှာ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် ဓလေ့တချို့ သတ်မှတ်ထားတာ မှတ်သား သတိပြု ဆင်ခြင်ဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါတွေက သင်္ကြန်အခါမှာ ……
(၁) ငိုကြွေးခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း။
(၃) သူတပါးအသက် သတ်ဖြတ်ခြင်း။
(၄) အရက် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း။
(၅) စိတ်ဆိုးခြင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်း။
(၆) သွေးဖောက် သွေးထုတ်ခြင်း။
(၇) ဆီလိမ်း ဆေးလိမ်းခြင်း။
(၉) ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူသိုလှောင်ခြင်း။
(၁၀) ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချခြင်း၊ ဆိုင်ထွက်ခြင်း မပြုကြရဘူး ဆိုတာပါပဲ။(သူ့ခေတ် သူ့အခါ သူ့ဓလေ့ထုံးစံ သူ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။)
သင်္ကြန်တွင်းသာ မဟုတ်ဘဲ ဘယ်အချိန်အခါမဆို မကောင်းသော အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အကြံအစည်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါတယ် …. ။
“မဟာသင်္ကြန်”နှင့် တွဲဖက်၍ “အတာ”၊ “အတာစား” ဟူသော ဝေါဟာရတို့ကို ပြောဆို သုံးစွဲကြတာကို တွေ့ရပါတယ် … ။
“အတာ”ဟူသည် လောကီအလို ‘ဒဏ်သင့်ခြင်း’ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ‘အန္တ-အဆုံး’ဟူသော ပါဠိပုဒ်မှ ‘အတာ’ဖြစ်လာသည်ဟုလည်း ကြံဆကြပါတယ် …. ။
ယင်းအလိုအားဖြင့် “အတာ”ဟူသည် ‘နောက်ဆုံးကာလ၊ အကျပိုင်းကာလ’ကို ဆိုလိုပါတယ် …. ။
“အတာရက်”မှာ သင်္ကြန်အတက်ရက် ဖြစ်၏။ နှစ်တစ်နှစ်၏ နောက်ဆုံးရက်ပင် ဖြစ်တယ်။ သင်္ကြန်အတက်ရက်နှင့် မွေးနေ့တိုက်ဆိုင်သူများသည် “အတာသင့်”သူများ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကိုပင် အတာစားသည်ဟု ပြောဆို သုံးစွဲနေကြပါသေးတယ် …. ။
အတာစားသည့် နေ့နံသားသမီးတို့သည် အတာတက်မည့်အချိန် အတိအကျတွင် “အတာစား”ရပါတယ်။ အတာစားဟူသည် အတာတက်ချိန်မှာ ကောင်းမွန် သန့်ရှင်းစွာ ဝတ်စား ဆင်ယင်လျက် အရှေ့တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူကာ ပူဇော်ရိုသေထိုက်သူများကို လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ဖြင့် ဆက်ကပ်ခြင်း လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်း ပြုကြရတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ် …. ။
အတာစားခြင်း၏ အကျိုးကား … အတာပုည၊ ကုသလကို၊ ပြုကြကုန်သော၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် “အတာကမ္မံ ကရောန္တဿ မဟာဘောဂံ မဟာသုခံ မဟပ္ဖလံ စတုဒ္ဒိသံ ဝေရီဇေယျသုမင်္ဂလံ”ဟု ရှေးပညာရှိတို့ ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်နှင့်အညီ ထိုကဲ့သို့ ရတနာသုံးပါး စသည်တို့အား လှူဒါန်း ပူဇော်ကြသော သူတို့သည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာတရား ပြန့်ပွားတိုးတက် ပြည့်စုံကုန်ရာသည် … ဟု မှတ်သားရဖူးပါတယ် …. ။
အတာအိုးကို သင်္ကြန်ကို စောင့်ကြိုသည့်အနေဖြင့် သင်္ကြန်မကျခင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရသည်။ (၇)ရက်သားသမီးတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ပန်း ၇-မျိုးဖြစ်စေ၊ အညွန့် ၇-မျိုးဖြစ်စေ ရေပြည့်အိုးမှာ ထိုးလေ့ ထည့်ကြလေ့ရှိပါတယ် ….. ။
အညာနယ်ဘက်မှာတော့ သင်္ကြန်ကျသည်နှင့်တပြိုင်နက် အတာအိုးမှ ရေကို သွန်၍ သင်္ကြန်ပန်း၊ သင်္ကြန်အညွန့်တို့ကို အိမ်ဦး ဝင်းထရံ စသည်တို့၌ ထိုးစိုက်ကာ နှစ်သစ်မှာ ဘေးရန်ကင်းကွာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာဖို့ ဆုတောင်းဆုယူ ပြုကြလေ့ရှိပါသည် …. ။
Credit: Myanmar Gezette.
(အထက်ဖော်ပြသည်များကတော့ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံ ကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကိစ္စရပ်များသာဖြစ်ပါသည်။)
အတာအိုးဆိုတာ သင်ျကွနျတှငျးမှာ သိကွားမငျးက လူ့ပွညျကို ဆငျးလာတယျလို့ အယူရှိတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သိကွားမငျးကို ကွိုတာပေါ့။ အဲ့ဒီအခြိနျအတှငျးမှာ မကောငျးမှု တတျနိုငျသမြှမလုပျဘဲ ကောငျးမှု ကုသိုလျနဲ့ပဲမှလြေ့ျော ကွပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ အတာအိုးနဲ့ အတူ အတာပနျးဆိုတာရှိတယျ။ အတာပနျးတှကေတော့……..
တနင်ျဂနှဆေို အ-ဥ -အုနျးရှကျ၊သွဇာရှကျ ၊
တနင်ျလာအတှကျဆို … က -ခ-ဂ-ဃ-င ထဲက ကနျ့ကျောပနျး၊ခရေ …
စနဆေို တမာရှကျ၊ ဒနျးပနျး၊ အစရှိသဖွငျ့…… နေ့ ၇ နကေို့ကိုယျစားပွုတဲ့ ၇ နနေံ့ပနျးနဲ့ပါ။ တဈခြို့ကလဲ ပတျဝနျးကငျြကိုမူတညျပီး ဒနျး၊ ဇီး၊ စသညျဖွငျ့ ထညျ့ကွတယျ။ သင်ျကွနျ ၄ရကျလုံး အတာအိုးနဲ့ကွိုပီး နှဈဆနျးတဈရကျနရေ့ောကျတော့ သဲဖွူ၊ ခညျြကွိုးတှထေပျဖွညျ့ပီး အန်တရာယျကငျး ပရိတျရှတျကွတဲ့အခါ “အတာအိုး” နဲ့ “အတာပနျး” ကနေ “ပရိတျအိုး” နဲ့ “ပရိတျပနျး” အဖွဈ အသှငျကူးပွောငျးပီး မိမျတို့အိမျ ပတျပတျလညျမှာ “ပရိတျပနျး” “ပရိတျသဲ” တှနေဲ့ ကာရံပီး အန်တရာယျကငျးအောငျ လုပျတယျလို့ အယူရှိတယျ …. ။
တခါက သိကွားမငျးနှငျ့ ဗွဟ်မာမငျးတို့ ၂-ယောကျ စကားလကျဆုံ ပွောကွရာ ‘ကဿပဘုရားရှငျလကျထကျ မတိုငျခငျက လူ့ပွညျ၌ တဈပတျလြှငျ ၈-ရကျ ရှိခဲ့ပွီး ယခုအခါ ၇-ရကျသို့ ပွောငျးသှားပွီဖွဈကွောငျး’ သိကွားမငျးက ပွောလရော ဗွဟ်မာမငျးက မဖွဈနိုငျဘူးဆိုကာ ငွငျးခုံကွပါသတဲ့။
ထို့နောကျ ရှူံးတဲ့သူ ခေါငျးဖွတျခံကွေးဟု သတျမှတျကာ လူ့ပွညျသို့ ဆငျးပွီး ထိုအခြိနျက သီလ၊ သမာဓိနှငျ့ ပွညျ့စုံသညျ့ ရသထေံ့တှငျ အဆုံးအဖွတျ ခံယူကွပါသတဲ့။ အဘိဉာဏျရ ရသကေ့ ယခုအခါတှငျ လူ့ပွညျတှငျ တနင်ျဂနှအေစ စနအေဆုံး ၇-ရကျသာ ရှိတော့သညျဟု အဆုံးအဖွတျပေးခဲ့လသေတဲ့။ ဗွဟ်မာမငျးလညျး သူ့ကတိအတိုငျး သူ၏ဦးခေါငျးကို အဓိဋ်ဌာနျဖွငျ့ ဖွတျပွီး သိကွားမငျးလကျသို့ ပေးအပျလိုကျပါတယျ ….. ။
ထိုဗွဟ်မာဦးခေါငျးပွတျကွီး သိကွားမငျးလကျထဲသို့ ရောကျသညျ့အခါ ဒီဗွဟ်မာဦးခေါငျးပွတျကွီးကို မွပေျေါခထြားလြှငျ ၇-နှဈ ကမ္ဘာမီးလောငျပွီး မိုးခေါငျလိမျ့မညျ၊ ရတှေငျ ထားပါကလညျး သမုဒ်ဒရာ ၇-စငျးမှ ရမြေား ခနျးခွောကျသှားလိမျ့မညျလို့ သိကွားမငျးက စဉျးစားမိသတဲ့။ ဒါနဲ့ မွမှောလညျး မထား၊ ရသေို့လညျး မပို့တော့ဘဲ နတျသမီး ၇-ယောကျကို တဈဦးလြှငျ တဈနှဈစီ ဗွဟ်မာဦးခေါငျးကို ကိုငျထားရနျ တာဝနျပေးလိုကျသတဲ့ ….. ။
ထိုနတျသမီးတှရေဲ့ တဈဦးမှ တဈဦးသို့ ဗွဟ်မာဦးခေါငျးကိုငျရနျ အလှဲအပွောငျးကို သင်ျကန်တလို့ ချေါပွီး ထိုမှ ရှလြေ့ော ဆငျးသကျကာ သင်ျကွနျဆိုတာ ဖွဈလာပါသတဲ့။ ဒါကတော့ သင်ျကွနျနဲ့ပတျသကျလို့ ပွောတတျတဲ့ ပုံပွငျပါ။
မွနျမာပွညျမှာ တဈနှဈတဈခါ ထုတျဝတေဲ့ သင်ျကွနျစာမြားမှာလညျး ဗွဟ်မာမငျးကွီးရဲ့ ဦးခေါငျးကို လှဲပွောငျးပေးနပေုံကို ဖျောပွလရှေိ့တာ သတိပွုမိပါတယျ။
ဘာပဲပွောပွော သင်ျကွနျဆိုတာ ပွောငျးရှခွေ့ငျး အဓိပ်ပာယျလို့သာ လှယျလှယျ မှတျလိုကျကွပါစို့။
ရှေးမှတျတမျးမြားအရ ရကေစားပှဲတျောကို ပထမဆုံး စတငျခဲ့သညျ့ ဘုရငျမှာ ပုဂံခတျေ၊ နရသီဟပတမေ့ငျးလကျထကျတှငျဟု သိရပါတယျ။ ထိုမငျးသညျ ရကေစားပှဲတျောတှငျ သူ၏မိဖုရား စောလုံကို စ,နောကျမိခဲ့ဖွငျ့ စောလုံမှ ထမငျးပှဲတှငျ အဆိပျထညျ့ကာ လုပျကွံသညျအထိ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဘုရငျက အခြိနျမီ သိရှိသဖွငျ့ အသကျမသခေဲ့ဘဲ မိဖုရားစောလုံကို မီးကြီးခဲရဲရဲတှငျ မီးကငျသတျစခေဲ့ပါတယျ။ သင်ျကွနျအစ ကွကှေဲစရာ မှတျတမျးလေးတဈခုဟုသာ ဆိုပါရစေ …. ။
ရှေးပညာရှိကွီးတှဟော အတာနှဈဦးမှာ ရှောငျကွဉျရမယျ့ ဓလတေ့ခြို့ သတျမှတျထားတာ မှတျသား သတိပွု ဆငျခွငျဖှယျ တှရေ့ပါတယျ။အဲဒါတှကေ သင်ျကွနျအခါမှာ ……
(၁) ငိုကွှေးခွငျး၊ ပူဆှေးခွငျး။
(၃) သူတပါးအသကျ သတျဖွတျခွငျး။
(၄) အရကျ မူးယဈဆေးဝါး သုံးစှဲခွငျး။
(၅) စိတျဆိုးခွငျး၊ ခိုကျရနျဖွဈခွငျး။
(၆) သှေးဖောကျ သှေးထုတျခွငျး။
(၇) ဆီလိမျး ဆေးလိမျးခွငျး။
(၈) သဈပငျခုတျဖွတျခွငျး၊ ထငျးခုတျခွငျး။
(၉) ကုနျပစ်စညျး ဝယျယူသိုလှောငျခွငျး။
(၁၀) ကုနျပစ်စညျး ရောငျးခခြွငျး၊ ဆိုငျထှကျခွငျး မပွုကွရဘူး ဆိုတာပါပဲ။(သူ့ခတျေ သူ့အခါ သူ့ဓလထေုံ့းစံ သူ့အကွောငျးအကြိုးနဲ့သူ ရှိပါလိမျ့မယျ။)
သင်ျကွနျတှငျးသာ မဟုတျဘဲ ဘယျအခြိနျအခါမဆို မကောငျးသော အပွုအမူ၊ အပွောအဆို၊ အကွံအစညျတှကေို ရှောငျကွဉျရပါတယျ …. ။
“မဟာသင်ျကွနျ”နှငျ့ တှဲဖကျ၍ “အတာ”၊ “အတာစား” ဟူသော ဝေါဟာရတို့ကို ပွောဆို သုံးစှဲကွတာကို တှရေ့ပါတယျ … ။
“အတာ”ဟူသညျ လောကီအလို ‘ဒဏျသငျ့ခွငျး’ ဖွဈသညျ။ တနညျးအားဖွငျ့ ‘အန်တ-အဆုံး’ဟူသော ပါဠိပုဒျမှ ‘အတာ’ဖွဈလာသညျဟုလညျး ကွံဆကွပါတယျ …. ။
ယငျးအလိုအားဖွငျ့ “အတာ”ဟူသညျ ‘နောကျဆုံးကာလ၊ အကပြိုငျးကာလ’ကို ဆိုလိုပါတယျ …. ။
“အတာရကျ”မှာ သင်ျကွနျအတကျရကျ ဖွဈ၏။ နှဈတဈနှဈ၏ နောကျဆုံးရကျပငျ ဖွဈတယျ။ သင်ျကွနျအတကျရကျနှငျ့ မှေးနတေို့ကျဆိုငျသူမြားသညျ “အတာသငျ့”သူမြား ဖွဈလာပါတယျ။ ဒါကိုပငျ အတာစားသညျဟု ပွောဆို သုံးစှဲနကွေပါသေးတယျ …. ။
အတာစားသညျ့ နနေံ့သားသမီးတို့သညျ အတာတကျမညျ့အခြိနျ အတိအကတြှငျ “အတာစား”ရပါတယျ။ အတာစားဟူသညျ အတာတကျခြိနျမှာ ကောငျးမှနျ သနျ့ရှငျးစှာ ဝတျစား ဆငျယငျလကျြ အရှတေ့ောငျအရပျသို့ မကျြနှာမူကာ ပူဇျောရိုသထေိုကျသူမြားကို လှူဖှယျပစ်စညျးတို့ဖွငျ့ ဆကျကပျခွငျး လှူဒါနျးပူဇျောခွငျး ပွုကွရတယျလို့ ဖျောပွထားတာတှေ တှရေ့ပါတယျ …. ။
အတာစားခွငျး၏ အကြိုးကား … အတာပုည၊ ကုသလကို၊ ပွုကွကုနျသော၊ အမြိုးသား အမြိုးသမီးတို့သညျ “အတာကမ်မံ ကရောန်တဿ မဟာဘောဂံ မဟာသုခံ မဟပ်ဖလံ စတုဒ်ဒိသံ ဝရေီဇယေသြုမင်ျဂလံ”ဟု ရှေးပညာရှိတို့ ရေးဖှဲ့ခဲ့သညျနှငျ့အညီ ထိုကဲ့သို့ ရတနာသုံးပါး စသညျတို့အား လှူဒါနျး ပူဇျောကွသော သူတို့သညျ ကောငျးကြိုးခမျြးသာ မင်ျဂလာတရား ပွနျ့ပှားတိုးတကျ ပွညျ့စုံကုနျရာသညျ … ဟု မှတျသားရဖူးပါတယျ …. ။
အတာအိုးကို သင်ျကွနျကို စောငျ့ကွိုသညျ့အနဖွေငျ့ သင်ျကွနျမကခြငျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျရသညျ။ (၇)ရကျသားသမီးတို့အတှကျ ရညျရှယျ၍ ပနျး ၇-မြိုးဖွဈစေ၊ အညှနျ့ ၇-မြိုးဖွဈစေ ရပွေညျ့အိုးမှာ ထိုးလေ့ ထညျ့ကွလရှေိ့ပါတယျ ….. ။
အညာနယျဘကျမှာတော့ သင်ျကွနျကသြညျနှငျ့တပွိုငျနကျ အတာအိုးမှ ရကေို သှနျ၍ သင်ျကွနျပနျး၊ သင်ျကွနျအညှနျ့တို့ကို အိမျဦး ဝငျးထရံ စသညျတို့၌ ထိုးစိုကျကာ နှဈသဈမှာ ဘေးရနျကငျးကှာ ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကနျြးမာခမျြးသာဖို့ ဆုတောငျးဆုယူ ပွုကွလရှေိ့ပါသညျ …. ။
(အထကျဖျောပွသညျမြားကတော့ ရိုးရာဓလထေုံ့းစံ ကဲ့သို့ဖွဈနသေောကိစ်စရပျမြားသာဖွဈပါသညျ။)
Previous: အမျိုးသားတွေအတွက် အသက်ရှည်ဆေး ၉ မျိုး
Next: တူ၊တူမ ရှိတဲ့သူတွေသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးအားသာချက် (၇)မျိုး